पुर्खाका पाइला खोज्दै जाँदा | वीरेन्द्र शाही | Saugat : Naya Yougbodh
पुर्खाका पाइला खोज्दै जाँदा | वीरेन्द्र शाही
31st July 2014	·2Comments
बर ढलेछ । पिपल बूढो भएछ । पैरोले पुछ्न बाँकी चौतारो । कमेरो उडेका घर । लिउन उम्केका पेटीहरू ।
म उक्लदै थिएँ भेरी तिरबाट ।
हाम्रा चौतारा, पँधेरा, कुवा, बाटाहरू किन यति बिराना ?! दिदी भाइका फाग, भगवतीका फाग, गाइनेका कर्खा…। बूढाबूढी सम्झन्छन् तर गाउँदैनन् । राग र तालहरू विलीन भएका छन् सैरेली गीत र सैरेली नाचका ।
सैरेली र सैरेलो बीचको प्रेम । प्रतिफलका छोराछोरी । बाजेले सैरेली नाचेको, बुबाले सैरेली ल्याएको, आमाले सैरेली गाएको । नाकमा बुलाकी, चोली, छिटको धोती लगाएर सैरेली नाच्ने माझीको एउटा विलोपको कहानी सुन्छन् केटाकेटीहरू ।
परन्तु, पैसेरुको ताल र रागहरू सर्दैनन् आगन्तुकका खुट्टा र मादलहरूमा । सरिङ्गेका मयुर प्वाँखहरू चढ्दैनन् ढाडहरूमा । हाता खेल्दैनन् लठ्ठीहरूमा । फन्किदैनन् हातहरू अगुवाका निर्देशनमा । नेवरहरू बज्दैनन् । झ्यालीहरू बज्दैनन् । ट्याम्कीहरू बज्दैनन् । सिङ्गारु नाच्दैनन् पर्व र मेलाहरूमा । ज्ञादो वादी भन्छ मादलमा खरी राखिनँ । फुटेको ट्याम्को मोहोर्दैन जेठो सार्की अचेल । कर्खा गाउँदै हिड्ने गाइने दाइ भन्थ्यो यसपालि सारङ्गीमा चुडेको तार फेरेको छैन ।
देश विकासको कर्खा गाउँथ्यो गाइने । उसको कर्खा योजना आयोग, सिंहदरबार सुन्दैनथ्यो । नेता सुन्दैनथे । त्यो गाइने देश विकासको गीत सुनाउन हिड्दा–हिड्दै भेरीतिरमा म¥यो रे । उसको गीत ऊसँगै म¥यो । उसको सारङ्गी लामो समयसम्म भेरी तिरमै थियो रे । कसले चो¥यो उसको सारङ्गी ?
गाउँतिर गाइनेहरू सारङ्गी बोकेर बया माग्दैनन् अचेल । झरी गाउँदैनन् रोपार्नीहरू । गोलसिमलको आशीष थाप्दैनन् खेत मालिकहरू । ठाडी भाका गाउँदैनन् कल्यानीतिर कोही । दियालोमा उज्यालो थप्न साँझ सुनाउँदिनन् हजुरआमा नातिलाई लोककथा । रुपौला कथा, लिख्या टोक्यानीको कथा, सुनकेस्रा रानीको कथा, राजकुमार दिक्पालको कथा, …ले झरिलो नयाँ दियालो सल्काउँदिनन् हजुरआमा ।
कला संस्कृति भेषभुषाको कुम्लो बोकेर आएथे हाम्रा पुर्खा । लोक जीवनसँग जोडिएका झिल्का र झाँकीहरूलाई किंवदन्तीहरूमा मात्र कसरी जोगाउनु ?
सोरठी नाच्दैनन् पुर्सिङ्गे केशसिंहको मृत्युमा । बच्चाबच्ची सुत्नु अगाडि खेल्दैनन् गाउँखाने कथा । गाउँ दिदैन कोही । गाउँ पाउँदैन कोही । ‘गाउँ मेरो पक्का, तँलाई दिएँ धक्का …।’
नयाँ बालबिरुवा चिन्ने, लुकेर रह खेल्ने, तरुल खन्ने बालबालिका देखिदैनन् अचेल । प्रविधिले केटाकेटीलाई कोठामै कोचेर कुँजो बनाउँदैछ बिस्तारै । कार्टुन हेर्दै हुर्केकाहरू के सिक्छन् देश ? के बाँच्छन् देश ? के बुझ्छन् देश ? माटोमा नहुर्केकाहरू माटो के सिक्छन् ? मिनिरल वाटर खाँदै हुर्केकाहरू नदी के सिक्छन् ? झरना के सिक्छन् ? खोला के सिक्छन् ? धारो, कुवा के सिक्छन् ? प्लास्टिकका फूलमा रमाउनेहरू जङ्गल के सिक्छन् ? फूल के सिक्छन् ? पङ्खाको हावाले फोक्सो भर्दै हुर्केकाहरू चौतारो, देउराली, भञ्ज्याङ के सिक्छन् ?
सिक्ने देश कुन हो ? बाँच्ने देश कुन हो ? खेल्ने माटो कुन हो ?
गाउँ फड्किएछ । संस्कृति फड्किएछ ।
पर पुगेर बिरानिदै हुनुहुन्छ पाठक तपाईं । ऐजन पारामा म पनि ।
समाज कहाँ पुग्यो ? आँखा उघारेर हेर्छु ।
गाउँ अलिकति नेपालगञ्ज गयो । अलिकति दाङ गयो । अलिकति काठमाण्डौं गयो । अलिकति कालापहाड गयो । अलिकति साउदी, दुबइ र कतार गयो ।
संस्कृतिमा अलिकति सहर पस्यो । अलिकति प्रविधि पस्यो । अलिकति उपभोक्ता पस्यो । अलिकति पश्चिमा पस्यो । अनि सैरेली हरायो । पैसेरी हरायो । ठाडी भाका हरायो । कर्खा हरायो । सिङ्गारु हराउँदैछ ।
पुर्खाको चिनो हामीले बचाउन सकेनौं । हामीले जोगाउन सकेनौं ।
कला संस्कृति भेषभुषाको कुम्लो बोकेर आएथे हाम्रा पुर्खा । लोक जीवनसँग जोडिएका झिल्का र झाँकीहरूलाई किम्वदन्तीहरूमा मात्र कसरी जोगाउनु ?
मान्छेहरू पुरानो बिर्सेर नयाँ–नयाँ भनिरहेछन् ।
आफूलाई बचाउन नसकेको चौतारोमा बिसाउँछु । हेर्छु नाङ्गा डाँडा र पाखाहरू ।
हावाका ओठहरू सुसेल्छन् सिङ्गारु र ठाडी भाकाहरू । पुख्र्यौंली चिनोको दुर्दशामा घोत्लन्छु । र सम्झम्छु आदि मनसुने हिडेथ्यो यही बाटो संस्कृति र सभ्यता बोकेर ।
थुतुने संस्कृति । थुतुने सभ्यता । यही संस्कृतिको अवशेष खोज्छु भेरी किनारहरूमा । भेरी नै मेरो मिसिसिपी हो । भेरी नै मेरो ह्वाङ हो । गङ्गा हो । यही किनारमा विकसित भएको हो मेरो सानो सभ्यता ।
सिद्धबाबा बाघको छालामा बसेर माछा मार्थे रे । आदि पुर्खा ती माछा खान्थे रे । रहस्यमय पृथ्वीलाई अझैं रहस्यमय बनाउने यी किम्वदन्तीहरू बोकेर भेरी तटमा बसेका छन् सिद्धबाबा ।
यतै छन् मेरा परम्पराका आवाजहरू । यही हावाको सुसेलीमा गुञ्जन्छ मेरो परम्परा । यही माटोको कण–कणमा नाचेथे मेरा पुर्खाहरू । चाँप, नेवर, झ्याली, मादलका तालहरूमा सुसेलेथे गीतहरू यी हावाका साथमा ।
आज हुनुको चेतनामा पुर्खाका पाइलाहरू हराउँदैछन् । कसले खोज्ने ती पाइलाहरू । हिजो बिना आज नबन्नुको बोध शून्यताको परिणाम । हिजोलाई आजमना प्रवेश गराइ बाँच्ने आजवादीहरू आफू परम्पराको उपज भएको बिर्सन्छन् ।
रामप्रसाद जिब्रो बटार्दै विदेशी गीत गाउँछ । नीरा पप गीत गाउँछे । धने फिल्मी कुरा गर्दै डिस्को जान्छ । के थाहा पुख्र्यौली संस्कृति ।
ग्रहणशीलतामा अभाव ।
समयको दुरी नाप्न कस्तो क्लिष्टता ।
भौतिक वस्तुको भोगले मात्र आधुनिक बन्न कहाँ सकिँदो रहेछ र !
परम्परा, संस्कृति, रीतिरिवाज छोडेर आधुनिक बन्ने धुनमा गाउँमा अलिकति रक्सी चल्छ । अलिकति खेतीपाती चल्छ । अलिकति विदेशी कुरा चल्छ । बाँकी सबै राजनीति चल्छ ।
संस्कृतिको दाप भिरेर बाटो अल्मलिदै छ ।
यात्रा निरन्तर गर्ने प्रयास ।
खिइँदै गएका पुर्खाका पाइला कसले खोज्ने होला !
दुविधा भइरहेको बेला आदिम प्यासहरू मेट्न म आइपुगेको ठाउँको नाम हो–
कालागाउँ कोट ।
Dhan Roka Pyuthan says:
nepali saskirtiko jagerna garnu parcha solta jiu….kaha hoesincha…aaja voli
संप्रस पौडेल says:
वाह कति मिठो यथार्थता झल्काएर लेख्नु भएछ ।
गजप लाग्यो ।